Islam doonayo si ay ula wareegaan ee Sweden | Apg29
Waxaa jira loollan xagga ruuxa ah ee dalka our dhexeeya masiixiga iyo islaamka.
Waxaa jira Muslimiin badan oo sannadihii ugu danbeeyay ee dalka uu doortay waddada Christian, ka fog-nacayb iyo colaad. Taasi waa dhinaca wanaagsan ee wax, halka khatar Islaamiyiinta kordhiyaa.
Integration - arrin muhiim ah
siyaasiyiinta keentay ayaa hadda hadalka ku saabsan isdhexgalka in uu yahay arrin muhiim ah. Si cad u dhib ayaa la odhan karaa.
Sida iska cad, ma ahan sidaas smart in ay si khafiif qaado arrin muhiim ah. Maxaa la samayn karaa ku saabsan arintan oo halis ah? Jawaabta murugo waa "aan aad" ama "ku dhawaad ​​waxba".
Sababta sawir isagoo taasi waa waxa cilmiga ah, Professor Ruud Koopman gabagabeeyay. Waxa uu leeyahay in ka badan 20 sano cilmi baarista ee is-dhexgalka iyo milmaan ka mid ah Muslimiinta ee Europe.
In wargeyska Norwegian Document ka akhrisan kartaa waxa uu la timaado. Uu gabagabo yahay: Islam u ogolaanaya ma heshii la dimuqraadiyadda iyo bulshooyinka reer galbeedka. Waxaa shaki la'aan waa adag tahay in ay dadka dhexgalaan Muslimiinta ka badan kooxaha kale ee waddanka u soo guurey ee bulshooyinka reer galbeedka.
Horeba 2013 Koopman daabacay warbixin la socda baadhitaan ayaa muujiyay, in saddex-meelood laba ka mid ah kuwa Muslimiinta la waraystay ay aaminsan yihiin in sharciyada diinta ayaa ka muhiimsan sharciga dalka ay ku nool yihiin.
No bulshada Western ayaa ku guulaysteen in ay midayso Muslimiinta. Sidaas darteed, waa dhalanteed ah in Sweden loo gaaro waxa dalka kale ma jiro ayaa ku guulaysatay.
Tani waa sababta oo ah waxay ku saabsan tahay dhaqan kala duwan, diinta, iyo arinkii in khilaafka bulshada iswiidhishka.
Xalka waa, si kastaba ha ahaatee, iyo in uu yahay markii Muslimiinta badali si iimaanka Christian. Waxaa jira tusaalooyin badan oo ka Yeelanina kuwa ka Yeeshay tallaabo this, ugu fiican ayaa u suurtagashay in ay dhex galaan bulshada.
Iyadoo ay taasi jirto, dooro Migrationsverket weli nay badan oo ka mid ah kuweeda Christian, halka tirada badan - kuwa aan doonayaa in ay dadka dhexgalaan - sii. Tani waxay xaqiijin karin in ay qalad xun!
Haddii aad ka fal horyaalka sidaas darteed u akhri maqaalkan oo arag tusaale u ah waxa ka dhacaya dalkeena.
Soheila Fors ayaa utet a fl riwaayado, ayay ku dhashay Iran oo wuxuu yimid ka dib in ay Sweden. Maanta ayay fadhiya Christian ah oo uu leeyahay waayo-aragnimo ah ee labada Islam oo iimaanka Christian. In article ah oo Maanta Adduunka ayay inoo sheegayaa saabsan dhacdo:
"Oo waxay noqotay in laba jibbaaran markii aan lahaa Guddigaas oo iyadu way u timid inaad i waajahaan. ilxidhka ayaa waxaa si fiican u fadhiya, sida dhoola ka wayneeya. Sidaas bilaabay wadahadalka aan wada hadal dacwad la'aan. Markii ay weli ma helin meel kasta, waxay ahayd waqti ay ku hanjabaan: Waxaan halkan u yimid si ay ula wareegaan. mid ka mid No leeyihiin waa in ay bartaan Swedish, qof kasta waa in hadli Carabi. Markii aan xoog u leeyihiin, waxa kale oo lagu qasbi doonaa inuu xirto ilxidhka.
Baaqa siiyey dhadhanka oo kugu xumaada afkayga maxaa yeelay, waan la kulmay sidaas oo kale jeer aad u badan iyada oo badan. Waa xoolihii talisnimada diinta in had iyo jeer isku mid ka dhawaajin, labadaba 1980 Iran ee 2020 ee Sweden. "
Waxaan ka Hjällbo, xaafad ka mid ah magaalada Göteborg siin doonaa sawir kala duwan ee Sweden, kuwaas oo. World Maanta siinaysaa sawir ah waxa dhacay markii saddex Masiixiyiinta wacdiyay in Square ee.
Markaasaa waxaa jiray nin ka baandada iyo wuxuu yiri: ". Waxaad saddex daqiiqo si aad qaadato halkan ka, ama waxaan idinku soo gani doonaa"
Dhacdadan ayaa ka dhacay inta lagu guda jiro bisha Ramadaan iyo baandooyinka ayaa sidoo kale muujiyay in "All si dhakhso ah halkan. Muslimiin nahay. Annagu ma halkan aad rabto. "
The comments soo socda ayaa ku hadlay erayadii Muslimiinta: ". Waxaan halkan kuma aad rabto" "Waxaan halkan u yimid si ay ula wareegaan" iyo
Tani waxa ay muujinaysaa in ay jirto loollan xagga ruuxa ah ee dalka our dhexeeya masiixiga iyo islaamka. Hadda waa waqtigii sare Masiixiyiinta iyo siyaasiyiin ilaa toosin iyo dhacdooyinka dhab ah u qaataan.
Islaamiyiinta ayaa la sii kordhaya ee Sweden
Qofna ma aha in qabaa in Sweden waa rukunka ilaaliyo dunida saameynta ay Islaamiyiinta. Warbixin Säpo A muujinaysaa korodhka fiiqan ee Islaamka ee Sweden.
On TV, telifishinka iyo dhowr warbaahinta kale waxay noqon kartaa June 11 si ay qayb ka mid ah tirooyinka naxdinta leh ee FBI-da ku qaadan on tirada Islaamiyiinta ee Sweden.
Fredrik Hallström, ku-xigeenka madaxa la-dagaallanka argagixisannimada wuxuu leeyahay, "Waxaan ka walwalsan tahay koritaanka." Waxaa kale oo uu sheegay in warbixinta: "Maamulka hadda on weerar waxa ay ku xiran tahay tirada Islaamiyiinta xagjirka ah ee Sweden kordhay maratay sannadihii la soo dhaafay, ka boqolaal si kun. In May, mar hore waxay leedahay lix Islaamiyiinta caan ah ayaa loo xiray. "
Hadda waxaa jira kumanaan (!) Islaamiyiinta ee Sweden. Mid ka mid ah la odhan karaa in ay khatar ku iman karta amniga ee dalka. Waxaa laga yaabaa in kaliya wax ku xiran waqtiga ka hor inta aan bilaabi kartaa inaad aragto Islaamiyiinta xagjirka ah si ay u dhaqmaan hab kasta.
Waxaa uu ahaa kor u kac wayn ee tirada Muslimiinta ku nool Sweden sannadihii la soo dhaafay.
In Duke of this sidoo kale soo socota kor u kac wayn ee Islaamka. Islaamiyiinta ayaa diyaar u yihiin in ay sameeyaan wax kasta oo magaca ay aaminsan yihiin diinta, oo ay ku jiraan qarxinta hawada si loo dilo kuwa kale.
Bishii June, Service Security si aad uga Bixisaan laba imaamyada (!), Yaa ayaa si firfircoon uga masaajidda. Xubnaha kale ee deegaanka xagjirka Islaamiga ah ayaa sidoo kale la xiray by Service Security.
Muslim caadiga ah waa in aan jeclahay oo isku day in aad ku guuleysan waayo, Ciise. jacaylka Ciise dhigaysa Muslim ah in a raacsan jacaylka Ciise halkii noqday Islaamka.
Haddii aad u akhriyeysid yihiin Muslim waa in aad ogtahay in aad oo uu Ilaah jeclaaday. Sidaa darteed mid ah sameeyo sida badan oo kale oo la furo ilaa fariinta jacaylka.
Articles iyo videos in la sameeyey by kale oo aan ahayn apg29 matalaan fikradaha iyaga u gaar ah.
V 09, måndag 1 mars 2021 kl 01:31